दीर्घकालिन पर्यटक रणनीतिको आवश्कता
अपन दैनिक सम्पादकीय । अबको आठ साता पछि अर्थात सन् २०२० लाई नेपालले पर्यटन वर्ष मनाउने भएको छ । यस अघि सन् २०११ मा पनि पर्यटन वर्ष मनाउदा १० लाख पर्यटक भित्रिएका थिए भने सन् २०१८ मा १२ लाख पर्यटक भित्रिएको थियो । य ...
सिरहा : भन्न नसकेको कुरा
कानूनी राज्य र दिगो विकासको अब धारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नै स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि बिधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारला ...
सिरहा : जनता अझै अन्योलमा
विकाश र पविर्तन नभएको होईन् तर जसरी हुनु पर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन् नेताहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छैन् । २० औ वर्ष देखि निर्माणधिन हुलाकी सडक ८ वर्ष काटेको कमलाको पूल निर्माण ...
तिहारको शुभ प्रतिक नै ती हारको शुभकामना
नेपाली शब्दकोषमा ‘हार’ तत्सम् शव्द हो, जसको अर्थ नै माला हुन्छ । हामी नेपाली वर्षको एक पल्ट आफ्नो संस्कृति प्रदर्शन गर्छौ । तिहार बनाउछौ, अर्थात ती हार । जस्तो हजारौ पत्रले फूलबन्छ र फूलहरुको एउटा धागामा उनेर माला ...
स्मृद्धि कसरी ?
देशमा बल्ल सर्वसाधारण नेपालीले अब देशमा स्मृद्धिको सपना देख्न थालेका छन् । ५ प्रदेशका हजारौ स्थानीय तहका राजनैतिक कार्यकर्ताहरुले प्रयोग गर्दै आएको विवेकलाई सत्ता र भत्ता जस्ता विकृतिले भरिएको घैैटो फुटि सकेको छ । कानून बनाउन ...
लागु औषध नियन्त्रण — एक समस्या
अचेल मुलुकभरी नै एउटा जल्दो वल्दो समस्या देखा पर्दछ । लागु औषधको ओसार पसार र यसको प्रयोग खास गरीकन खुल्ला सिमाना भएका तराई मधेशका जिल्लाहरुमा दिनहु लागु औषध ओसार पसारको समाचार आइरहेको छ । यसै जिल्ला सिरहाका बरियारपट्टी नाका, ...
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कसरी ?
वर्तमान शासन व्यवस्थामा सबभन्दा ठूलो रोग भ्रष्ट्राचार नै देखिन्छ । भ्रष्ट्राचार भनेको केवल घुसमा नगद लिनु वा उपहार लिनु मात्र होइन । भ्रष्ट्राचार भनेको भ्रष्ट्र आचार हो । भ्रष्ट्राचारका अनेक रुप छन् । कोही बाह्रय भ्रष्ट ...
फैसला पनि एक चुनौति
धर्तीमा पाइला टेकेको ३ वर्षे बालक नर्सरी कक्षामा पुगेर शिक्षाको अनुभुति पाए झै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबिधानले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लागु भएको तेस्रो वर्षमा बल्ल नेपाली जनताले कानूनी राज्यको अनुभुति गर्न पाएका छन् ...
उपचुनावमा पनि अनुकरण गरौं
यस भुमण्डलमा ८४ लाख जीव रहेको अध्यात्मिक दर्शनमा सबभन्दा भिन्न र अदभूत शक्ति भएको मानवजाति नै हो । अरु जीव त समान गुणका हुन्छन भने विवेकले गर्दा सबभन्दा ठूलो जीव साबित भएका मानवमा एउटा गुण लिप्द हुँदै गएकोछ । मानवमा पशु ...
शिक्षामा समाबेसिकता कसरी ?
कुनै पनि देशमा विधि, पद्यति, शासन, सधैं एउटै हुदैंन । परिवर्तन स्वभाविक छ । देशको नै पुनः संरचना भइ सक्योे, पद्यति केन्द्रीतवाट विकेन्द्रीत भइ सक्यो । तीन तहको सरकार बनी सक्यो । संघीय प्रणालीको अबलम्वन गरियो, सबै क्षेत्रको अध ...